Semalt: Izihloko ze-WordPress - Ngaba Kukulungele Ukutshintsha?
Ukuba unayo iwebhusayithi kwaye ufumane i-theme entsha ye-WordPress ekhangelekile kwaye ifanelekileyo ngakumbi kunomxholo wakho wangaphambili, kufuneka uguqule ngokukhawuleza. Ukuba uyika ukuba ukutshintsha isihloko se-WordPress kuzakwenza ulahlekelwe ngumxholo wakho okanye izicwangciso, ulahlekanga ngokupheleleyo. Iingqungquthela ze-WordPress zijolise ekunikezeni iisayithi kunye neeblogi iimbonakalo ezingaqhelekanga, ngaphandle kokuphazamisa izicwangciso kunye nendawo yomxholo wethu.
I-Foundry ye-Theme yilapho ungayifumana khona inani elikhulu leengqikithi, kwaye inxalenye engcono kukuba akudingeki ukhathazeke ngokulahlekelwa kwezithuba zakho, iifoto, iphepha kunye neefayili zomsindo - airgrid m2 ??????????. Yonke into igcinwa ngokukhuselekileyo kwiziko le-WordPress, kwaye umxholo omtsha awuyi kudala iingxaki kuwe.
U-Ivan Konovalov, ingcali ephezulu Semalt , uya kuphonononga apha izinto ezimbalwa omele uzibuke xa utshintsha isihloko sakho se-WordPress.
Iintlobo zezithuba zobume:
Ukuba uye wasebenzisa umxholo odala iintlobo zeposi, ungabona ukuba uninzi lwezithuba zakho zanyamalala kwangoko. Kodwa akukho nto inokukhathazeka ngayo njengoko iintlobo zeposi zentsika ziza kubonisa izinto eziphezulu zamanqaku kwi-akhawunti yakho ye-WordPress. Kuthetha ukuba unakho ukubuyisela kalula iifayile zakho kwaye unokukwenza ukuba indawo yakho isebenze ngokuqhelekileyo..Iingqinisiso zabaThengi okanye iiGalleries ziintlobo zombini zezithuba omele uhambe nazo. Makheke apha ndikuxelele ukuba i-postmatic, i-Surf Office, u-Yeah Dave, kunye namawaka amashishini afanayo aqhuba ii-sites zabo kunye ne-Make, i-WordPress ingqungquthela ebalulekileyo kunye nobungqina bomsebenzisi.
Ukuba utshintshile isihloko sakho se-WordPress, unokufuna ukusetha amamenyu aqhelekileyo. Kule nto, kufuneka ubenze kwi-Appearance → Imenyu yokukhetha. Inceda ukulawula ukubonisa imenyu yakho yokuhamba kwaye isebenza njengomsebenzi wesibini osebenzayo. Xa uguqula i-WordPress themes, qinisekisa ukuba usethe amamenyu akho angokwezifiso kwaye ukhubaza zonke iimenyu ezingasetyenziswa kwaye zinyamalale kumxholo wakho omtsha. Uya kufuneka unikeze amamenyu akho amatsha indawo ethile xa umxholo wakho utshintshile ngenxa yokuba yonke imxholo iya kubeka onke amamenyu kwindawo ezingekho phantsi, ukuphazamisa ukubukeka kwendawo yakho.
Njengamamenyu, amawijethi akho aya kubandezeleka kwingxaki yokutshintsha indawo. Iimpawu ze-Wordpress zenzelwe ukubonisa zonke iifayile ezikhoyo kuphela, kwaye ukuba ufuna ukufihla okanye ukubonisa ezinye iwijethi ezintsha, kuya kufuneka wenze oko ngesandla. Unokulungisa ama-widget ngokuya kwi-Appearance → Icandelo lamajethi. Ukuba usebenzisa iMac, ungathabatha umfanekiso weskrini sonke ngokususa iShift + Cmd + 3.
Sizama njani ukuvavanya iindidi ze-WordPress?
Enye yeendlela eziphambili kunye ezilula ukuvavanya i-theme entsha ye-WordPress ngokusebenzisa inketho yokujonga kuqala kwi-Inthanethi → Iphepha leenhloko. Makheke apha ndikuxelele ukuba olu khetho alisoloko lunikeza iziphumo ezichanekileyo, ngoko ufuna ukushicilela umxholo wakho ukujonga ukuba kulungile kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi okanye cha.
Isiphetho - Utshintsho luhle:
Kuyinyani ukuba ukutshintsha i-WordPress ingqungquthela kubulungile njengoko kuya kubandakanyeka abantu abaninzi nangaphezulu. Iingqungquthela ezintsha zinika indawo yakho indawo entsha kunye nobuntu obumangalisayo. Ngexesha elifanayo, kufuneka ulondoloze iifayile zakho kwaye ulungele ukungena kwi-website yeWindowsPress.